बजेट ट्रेवलर गाइड को इस्तांबुल | सडकको लागि एक युगल
क्याले बेली चलाउँछ माउण्टेन लियोन - एक यात्रा ब्लग उसले विश्वभरको ब्याकप्किङमा दुई वर्ष पछि सुरू गर्यो। यदि तपाईं सडकमा यात्राको लागि यात्रा वा सुझावहरू बारे बढी जान्न चाहनुहुन्छ भने, तपाइँ दाँया सुत्ने बैग चयन गर्ने बारे आफ्नो भर्खरको पोस्ट पढ्न सक्नुहुन्छ।
टर्की एक सुन्दर देश हो जुन रोमाञ्चक चीजहरु संग लाग्न र हेर्न को लागी स्थानहरु हो। तपाईलाई एक नम्बर रोक्न इस्तांबुल, कला, संस्कृति, व्यवसाय र पर्यटनको लागि केन्द्र हो। इस्तांबुलमा टर्कीका सबै शहरहरूमा सबैभन्दा उच्च आबादी छ, यो विदेशी गन्तव्यको हलचल र हलचल अनुभव गर्न उत्तम गन्तव्य बनाइन्छ।
इस्तांबुल एक बजेट यात्रा गर्नेहरूको लागि सस्ती सस्ती छ। यसले केही थप अनुसन्धान र रचनात्मकता लिन सक्छ, तर यो पूर्णतया सम्भव छ कि यो सबै अचम्मको शहरको अनुभव बिना बैंक तोड्न प्रस्ताव गर्नु पर्छ। साथै, हामी यहाँ कम लागतको योजना सहयोग गर्न मद्दत छौं टर्की भ्रमण तपाई कहिल्यै बिर्सनुहुनेछैन!
भाषा: टर्की र अंग्रेजी
मुद्रा: टर्की लीरा
टिपिङ: यो रेस्टुरेन्टहरूमा 5-10% बीचको टिपको अपेक्षा गरिएको छ। ट्याक्सी लिँदा, यो ड्राइभरले तपाइँको थोरै सहयोग पुर्याउँदछ वा अतिरिक्त सहायता प्रदान नगरेसम्म यो टिप गर्न आशा गर्दैन।
सुरक्षा र घोटाला: ट्याक्सहरूबाट जोगिन कि एक मीटर छैन वा जोर गर्न प्रयास गर्नुहोस् तपाईंले तिनीहरूलाई सही रकम नगद दिनुभएको छैन। आफ्नो समय लिनुहोस् जब उजुरी को रकम तिर्नुहोस् र तपाईले तिनीहरूलाई बोलाउनुहुन्छ। स्थानीयहरु को सावधान रहनुहोस् जुन तपाईलाई माया गर्न चाहन्छु र "तपाईंलाई शहर देखाउँदछ"। केही घोटालाहरूमा, पार्टी पार्टी र पेयको रातको अन्तमा तपाईं एक हप्ताको बिलमा छोड्नुहुनेछ। यदि तपाईंले तिर्न रकम अस्वीकार गर्नुभयो भने, तपाइँलाई धम्की दिइन्छ वा खराब हुन सक्छ। र, सधैं जस्तै, तपाइँ भ्रमण गर्नुहुने कुनै पर्यटक शहरमा पिकप्लेटरहरूको बारेमा जान्नुहोस्।
लगभग कसरी प्राप्त गर्ने
त्यहाँ धेरै प्रकारको ट्रान्जिटहरू छन् जुन तपाइँले हवाईअन्तर्गत तपाईंको होटेलमा र शहर अन्वेषण गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। केहि अरूभन्दा बढी बजेट-अनुकूल छन्।
ट्याक्सीहरू। ढुवानीको सस्तो मोड होइन, तर तपाईं मात्र आफ्नो गन्तब्यमा जान चाहानुहुन्छ र रूट नक्साको बारेमा चिन्ता हुँदैन। यदि तपाइँ बजेटमा हुनुहुन्छ भने, यो सिफारिश गरिएको छ कि तपाई सार्वजनिक यातायात प्रणाली जान्नुहुन्छ।
सार्वजनिक यातायात। इस्तांबुलसँग एक व्यापक र स्पष्ट सार्वजनिक यातायात सेटअप छ। त्यहाँ मेट्रो रेलहरू, ट्रामहरू, घाटहरू, र एक मजेदारहरू छन् जुन तपाइँले सबै आवश्यक देखेको स्पटहरूमा लिनेछ। यदि तपाईं एक दिन भन्दा बढीको लागि इस्तांबुलमा हुनुहुनेछ भने तपाईले इस्तांबुल कार्टलाई मेट्रो पास गराउनु पर्छ जुन सार्वजनिक यातायातको सबै प्रकारका लागि काम गर्दछ। तपाइँ यसलाई यसलाई कार्ड मिसिनहरू (सबै व्यस्त ट्रांजिट टर्मिनलहरू मार्फत मात्र) मा लोड गर्नुहुन्छ र जानुहुन्छ। कार्डको प्रयोगले तपाईंलाई नियमित रूपमा ट्रांजिट शुल्कबाट 50% दिन्छ। https://www.theistanbulinsider.com/how-to-get-an-istanbul-kart-and-is-it-worth-it/
बस हप बस बस। यदि तपाईं शहरको अन्वेषण गर्न केहि दिनहरू छन् भने, ह्याप किट अफ बस टिकटले तपाईलाई सबैलाई भेट्न को लागी सबै महत्त्वपूर्ण साइटहरू हेर्न अनुमति दिन्छ। बस धेरै मार्गहरू छन् जसको लागि तपाईंले टिकट (बस चालकबाट) खरीद गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि तपाईसँग दिनभरि स्पेस खोज्न वा सजिलो बस यात्राको लागि यात्रा गर्नु हो। क्लासिक वयस्क टिकट 33 यूरो हो।
त्यहाँ इस्तांबुलमा छनौट गर्न धेरै सुन्दर, बजेट-अनुकूल, आवास विकल्पहरू छन्। तपाईं 5-तारा होटलको पन्तमा बस्न सक्नुहुन्न, तर तपाईं सहज र सुरक्षित हुनेछौं। शहरको उत्साह तपाईंको ढोका बाहिर छ जब एक महान् कोठा को आवश्यकता छ?
केन्द्रित स्थित, स्टार हलिडे होटल मन को शान्ति प्रदान गर्छ कि तपाईंको सामान सुरक्षित छ, पानाहरु सफा छ, र तपाईं एक शुभ राती निद्रा पाउनुहुनेछ। सबै कमरहरु मुफ्त वाईफाई संग आउँछ, र केहि मा तारीफें नाश्ता शामिल छ। नजिकैको काम गर्ने चीजहरूको बारेमा अगाडि डेस्कसँग कुरा गर्नुहोस् र उनीहरूले प्राय: धेरै स्थानीय आकर्षणहरूमा छूट दिनेछन्। https://www.expedia.ca/Istanbul-Hotels-Star-Holiday-Hotel.h1269887.Hotel-Information
एक अधिक बजेट-अनुकूल विकल्प को लागि, Cheers Hostel को जाँच गर्नुहोस। यो हस्टलद्वारद्वारा 2018 को लागि टर्कीमा सबैभन्दा राम्रो ह्यान्डललाई मतदान गरिएको थियो र यो आश्चर्य छ। नि: शुल्क वाईफाई, एअर कंडीशनर, र लकयोग्य स्टोरेज स्पेस प्रदान गर्न, साथीहरूले साथीहरूलाई भेट्नको लागि सुरक्षित र आनन्दित वातावरण प्रदान गर्दछ। साथै, तिनीहरूसँग धेरै स्रोतहरू छन् र इस्तांबुलमा जाने ठाउँहरूका लागि सुझावहरू छन्। https://www.hostelworld.com/hosteldetails.php/Cheers-Hostel/Istanbul/37282?dia=500
कुरा गर्न र हेर्नुहोस्
इस्तांबुलमा मजेदार चीजहरूको सूची सधैंभरि जान सक्छ, तर धेरै मानिसहरू छुट्टीमा धेरै समय बित्न सक्दैनन्! त्यसो भए, यहाँ हाम्रो शीर्ष3किफायती सिफारिसहरू छन्:
इस्तांबुल संग्रहालय पास, 85 लीरा किन्नुहोस्
यो पासले तपाईंलाई इस्तांबुलमा दर्जन भन्दा बढी संग्रहालयहरू, स्मारकहरू, र आकर्षणहरूमा स्वतन्त्र प्रवेश गर्न अनुमति दिन्छ। यो तीन दिनको लागी वैध छ, तर कुट्न आवश्यक छैन किनभने यो पासले तपाईंलाई कुनै पनि लाइनअप छोड्न अनुमति दिन्छ। एकपटक तपाईंले सबै नि: शुल्क आकर्षणहरू देख्नुभएपछि, पास पनि थप आकर्षणहरूमा ठूलो छूट प्रदान गर्दछ। यो बजेटमा इस्तांबुल हेर्न सबैको लागि आवश्यक छ!
यस पासको साथ, तपाईं निम्नका लागि निम्न प्रविष्टि गर्न सक्नुहुन्छ: ह्यागिया सोफिया संग्रहालय, टोपकापी पैलेस संग्रहालय, इस्तांबुल मोजी संग्रहालय, रमली हिसार संग्रहालय, यलिजिज पैलेस र धेरै धेरै।
टर्की स्नान लिनुहोस्, 50 लिरा
एक परम्परामा स्नान हामम सबै भन्दा आराम र रोचक अनुभव पर्यटकहरू इस्तांबुलमा हुनुपर्दछ। यसको लोकप्रियताको कारण, केन्द्रीय ह्यामहरूमा स्नानको लागि मूल्य धेरै उच्च छन्। यो एक सस्ता-एक-जीवनभर स्नानको अनुभव गर्ने सस्ता तरिकाको लागि, केवल मध्य इस्तांबुल बाहिरको यूसुडरको छिमेकीको टाउकोमा। यहाँ, तपाईं अझै भाप, रमाइलो नुहाउने मजा लिनुहुनेछ जब व्यावसायिक स्नानले तपाईंलाई तल खरिद गर्छ, तर लागतको अंशको लागि।
सस्ती योग्यताको लागि ग्रैंड बजार हेर्नुहोस्
इस्तांबुलको ग्रैंड बजार संसारको सबैभन्दा पुरानो ढिलाइ बजार हो। र, यो प्रवेश गर्न नि: शुल्क छ। बजारको स्वयं-निर्देशित भ्रमणमा आफैलाई लिनुहोस् जस्तै तपाईले चासो राख्नु भएको बाटो र स्ट्यान्ड मार्फत। तपाईंको फोनमा तपाईंको Google नक्सा खोल्नुहोस् राख्नुहोस् किनकि यो पर्यटकहरु हराउनका लागी साधारण छ! तपाईले सुन्दर भित्ता, लैंप, र चिसोको सट्टा भेट्टाउनुहुनेछ; तपाईंको यात्राको स्मारकको लागि सबै उत्तम। र जब तपाईले केहि मनपराउनु भएको छ भने, मूल्य तल हल्लाउन नबिर्सनुहोस्।
इस्तांबुल संस्कृति, सुन्दरता र उत्तेजनामा ​​भरपर्दो शहर हो। त्यहाँ चीजहरूको कुनै कमी छैन र हेर्न, तर तपाईं बजेटमा हुनुहुन्छ भने तपाईसँग आफ्नो यात्रा बुद्धिमानी योजना बनाउनु पर्छ। सौभाग्य देखि, त्यहाँ किफायती विकल्पहरू छन्, त्यसैले बजेटमा इस्तांबुल हेर्न पूर्णतया सम्भव छ।
यदि तपाईंले इस्तांबुलको यात्राको लागि यो मार्गदर्शकमा कुनै सुझावहरू प्रयोग गर्नुभएको छ भने हामीलाई टिप्पणीमा थाहा दिनुहोस्!
Pedro द्वारा आवरण फोटो Szekely.
श्रेणी: युरोप, होटल, यात्रा योजना, टर्की टैग: युरोप, हप हप अफ, होटल, इस्तानबुल, यातायात, यात्रा योजना, टर्की
← 10 ऐतिहासिक साइटहरु ग्वाटेमाला मा हेर्न
पालक र Feta- भरिएका Portobello मशरूम →